Umshini wokugaya we-Universal CNC wokulawula i-XK6150HS - TSINFA
Ulapha: Ikhaya1 / Umshini wokugaya we-Universal CNC wokulawula i-XK6150HS
CNC Universal Milling Machine XK6150HS
Umshini ungasetshenziselwa kokubili ukugaya okuqondile nokugaya okuvundlile, okunamathiselwe okuhambisanayo, futhi kungagaya izindawo ezahlukahlukene zokujikeleza nama-grooves, njll. Izingxenye ezimbili ezisika ikhanda lokusika lenza intambo ikwazi ukuzungeza nokulungisa kunoma iyiphi i-engeli, nezingxenye eziyinkimbinkimbi zokugaya nge-multi-angle nobuso obuningi ngesikhathi esisodwa sokubamba. Kuyinto imishini ekahle yokwenza imishini yezimboni zokwenziwa komakhenikha, isikhunta, izimoto nezithuthuthu.
1. Ukuhlelwa kwawo wonke umshini usebenzisa isakhiwo sokuphakamisa inqama, inqama isetshenziselwa ukunyakaza kwe-lateral, futhi ipulatifomu yokuphakamisa isetshenziselwa ukunyakaza kwe-longitudinal nokuphakamisa.
2. Lungiselela ikhanda lokugaya le-universal ukuze ubone ukwenziwa kwemishini jikelele kwama-hemispheres amile mpo, avundlile nangaphambili.
3. Amakholomu womhlahlandlela osizayo ophindwe kabili ahlelwe phambi kwesikhulumi sokuphakamisa, futhi ibanga phakathi kwamakholomu womhlahlandlela ophindwe kabili likhulu, elenza ngcono ukuzinza komshini wonke.
4. Lungiselela uhlelo lwe-CNC ezingxenyeni zomshini ezinezinhlaka eziyinkimbinkimbi nezimbotshana.
5. Isiphothi siqhutshwa yi-servo motor, kuhlanganiswe nokushintshwa kwamagiya aphakeme nangaphansi, ukulawulwa kwejubane elingenantambo egiyeni, ububanzi bamandla aqhubekayo, ithoshi eliphakeme kakhulu lesivinini, izici ezinhle zemishini nokusebenza okulula.
6. Ingacutshungulwa ngezinqubo eziningi ezifana nokugaya, ukubhoreka nokumba, futhi isetshenziswa kakhulu emikhakheni ehlukahlukene yemishini nasekuhloleni kokufundisa.
Igama Iyunithi I-XK6150HS I-XK6260HS
Usayizi wethebula mm 500 × 1650 600 × 2000
Ibanga ukusuka ekhaleni lokuphotha kuye etafuleni ubuncane mm 80 100
ubuningi mm 580 630
Ukuhamba kwetafula I-eksisi Y mm 650 650
I-eksisi kaZ mm 500 530
I-eksisi ye-X mm 1300 1500
Taper Uthi lokuphotha 7:24 2450 7:24 2450
Ibanga lokuphotha ububanzi ububanzi ngomzuzu 10 ~ 1600 10 ~ 1600
isikhundla 2, engenantambo 2, engenantambo
X 、 Y 、 Z Ibanga lokuphakelayo m / iminithi 2 2
X, Y, Z ukunyakaza okusheshayo m / iminithi 6/6/4 6/6/4
Amandla amakhulu emoto kw 7.5 （11） 11
X 、 Y 、 Z Motor Torque Nm 15 15
ukubeka ngokunemba mm ± 0.02 / 300 ± 0.02 / 300
Ukuphindaphinda ukuma kokunemba mm ± 0.01 / 300 ± 0.01 / 300
Isisindo somshini T 4.2 5.5
Isisindo seMax Load Ama-Kg 800 1000